स्वास्थ्य पेजगर्भवती र सुत्केरीले कस्तो र कति खाना खानुपर्छ ? - स्वास्थ्य पेज गर्भवती र सुत्केरीले कस्तो र कति खाना खानुपर्छ ? - स्वास्थ्य पेज
गर्भवती र सुत्केरीले कस्तो र कति खाना खानुपर्छ ?
हुन त हामी सबैलाई यो बेला कस्तो खाने भन्ने सामान्य जानकारी छँदैछ। तर कस्तो खाना कसरी तरिका मिलाएर खाने पोषणविद् सोफिया उप्रेतीले यसरी सुझाव दिनुभयो :
गर्भवती भएको बेलामा आइरनको कमीको जोखिम हुने हुँदा आइरन फोलिक चक्की डाक्टरको सल्लाह अनुसार मात्र खानुपर्छ। किनभने त्यसको महत्व ठूलो छ। बच्चा बढ्नको लागि आइरनको मात्रा बढी चाहिन्छ। बच्चालाई रोग नलागोस् भनेर फोलिक एसिडले पर्याप्त मात्रामा चाहिन्छ। बच्चा जन्मिसकेपछि भिटामिन ए र जन्मिएको ४५ दिनसम्म आइरन चक्की खानुपर्छ। यी पोषणतत्वहरू अत्यन्त जरुरी भएकाले खानालाई परिपूरक गर्छन्। यसबाट आमा र बच्चा दुवैलाई फाइदा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पोषिला खानाका साथसाथै पर्याप्त मात्रामा शरीरलाई आरामको पनि जरुरत हुन्छ।
(यो सामाग्री पोषणविद् उप्रेतीसँग पत्रकार सिर्जना खत्रीले गरेको कुराकानीका आधारमा तयार गरिएको हो )